मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई घरमै सलामी खाने रहर उर्ले पछि : कस्को के लाग्छ ? – YesKathmandu.com
मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई घरमै सलामी खाने रहर उर्ले पछि : कस्को के लाग्छ ?
आइतबार १२, मङि्सर २०७३
हो,यीनै प्रचण्ड सरकारका सहरी विकास मन्त्रीले आफ्नो काम देखाएका छन् । उनले प्रहरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाए । तीनलाई अगाडि उभाए र आफू रातो गलौंचा माथि उभिए । अगाडि दुईवटा घडा खडा गराए । प्रहरीको सलामी खाए । सलामी खाने अरु कोही नभएर स्वास्थमन्त्री गगन थापाका ससुरा अर्जुननरसिंह केसी हुन ।
जापान भ्रमण निस्कनुु अघि वरिष्ठ नेता पौडेलले यसो भने……..
यसलाई भनिन्छ लङ्गडा सोख
rambabu badal says:
Yo naya nepal ko mantri haru hun………?
राजमार्गमा गुडिरहेका गाडी रोकेर चालकको आँखा परीक्षण
कम्बोडियामा एक नेपालीलाई आठ वर्ष जेल सजाय
ओलीले मधेसवादी दललाई वार्तामा बोलाए
अघिल्लो सरकार जस्तै यो सरकारलाई विश्वास गर्न चीनसँग महराको आग्रह
दुई इन्जिनियरको धन्दा, लागु औषधले फन्दा
विवेकशील साझाद्वारा ढुंगेलको कैद माफीको बिरोध
जुनदिन आवश्यक्ता पर्छ त्यसै दिन सरकारमा जान्छौँ : अध्यक्ष यादव
कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव २१ गते तोकियो
अन्तत: नयाँ सरकार गठनको विषय पुग्ने भो सर्वाेच्चमा
प्रचण्ड र वैद्य माओवादी कार्यकर्ताको भिडन्तले घरबेटी श्रेष्ठ ‘इन्तु न चिन्तु’